Read 23134.cdr text version
Ukushoda kwezivikeli mzimba
Pengen Trading (Pty) Ltd
Inamba yokubhalisa 1997/021500/07
Kakhulu izinga lempilo yethu liboniswa isimo somzimba emizimbeni yethu. Umzimba ophilile usenza ukuthi sikwazi ukubamba iqhaza emisebenzini ejwayelekile yempilo njengomsebenzi, ukudlala, ukufundela ukuthi sizenze ngcono, ukuhamba sibone umhlaba osizungezile.
Ukushoda kwezivikeli mzimba njengoba kufakazelwa ngukuba phansi kokubalwa kwe-CD4, kusho ukubeka engozini yokungenwa izifo ezinjengomdlavuza, i-herpes, i-HIV/AIDS, isifo sesifuba, izifo zamaphaphu nezesibindi. Lokhu kusho ukuthi umkhuba wokuthi umuntu abesengozini yokungenwa yilezi zifo uyakhula ngamandla. Ucwaningo lukufakazele ukuthi Izwekazi lase-Afrika ukushoda kwalo kakhulu ngokudla okulungele umzimba ngenxa yokungabibikho kweseleniyamu kuholela ekubekeni izivikeli mzimba engcupheni.
Ukuba ngcono nge-CD4MaxTM
I-CD4MaxTM isakhiwo esinezinto zokulwa negciwane ezinamandla okwenza ngcono/ okunikeza amandla izivikeli mzimba. Ulwazi olukhona njengamanje lukhombisa ukuthi ukubalwa kwe-CD4 kukhula ngezinga eliphakathi nendawo lamaphuzu angama-50 emva kokwelashwa amasonto ayisi-6 kuphela. Ngako-ke ukuphila kubonakale kubuyiselwa esimeni ngesikhathi esifushane nje kubantu abasebenzisa i- CD4MaxTM. I-CD4MaxTM inganikezelwa ngokuphephile kubantwana abasandukuzalwa kanye nabantu asebegugile. Kwehlukana nje kuphela umthamo/isilinganiso abawuthathayo. Abesifazane abakhulelwe kufanele lo mkhiqizo bawusebenzise ngaphansi kwehlo lodokotela babo. Ezimeni lapho obekunikezelwe khona izidambisi gciwane ukubuyisela isibalo se-CD4 esimeni, ingasetshenziswa i-CD4MaxTM kanye nazo ukweseka izivikeli mzimba.
Ukudla okondla umzimba
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu ekubeni nempilo esezingeni eliphezulu ukuba nokudla okondla umzimba okufanele, lokhu kusho ukudla okulungele umzimba okunesilinganiso esifanele. Kodwa-ke abantu abaningi, kusukela ezinganeni kuye kubantu asebekhululile, abakwazi ukuthola ukudla okufanele. Ukudla okulungele umzimba kuhambisana nokuvocavoca umzimba. Lokhu kungahlukahluka, kungasuka emizuzwini engama-45 kuye kwengama-90 kabili kuya kokuthathu ngesonto.
Imikhiqizo ye- CD4MaxTM
Imikhiqizo yethu ye-CD4MaxTM inalezi zinto ezilandelayo: · Izinto zokwelapha (Ipaka leNyanga) elinamaphakethe amathathu ezichibiyeli kudla ezinomsuka owumbila ongezinongo zevanila, ubhanana nestrobheri, amaphilisi ayi-180 kanye nokhrimu wesikhumba ongama-100ml. Ukhrimu uwusizo kakhulu lapho kunezilonda ezibangwa ukulala kodwa ungasetshenziswa futhi ezimeni lapho kunesikhumba esilimele khona noma njengeloshini yokugcoba umzimba nezandla. Okuqukethwe Emgodleni Wezinto Zokwelapha nakho kuyatholakala njengemikhiqizo ehamba ngayodwa.
Indlela Yokuphila Yomuntu Uqobo
Indlela yomuntu yokuphila kanye nezindlela zokubaluleka kunesandla ekubeni sengozini yokungenwa yizifo. Nezinga lenhlanzeko yendawo esiphila kuyo linomthelela empilweni yethu. Ngezinye izikhathi izindawo esihlala kuzo noma esisebenza kuzo zibanga ingcindezi eyeqile ezingqondweni zethu ezinomphumela omubi kakhulu ekuvikelekeni kwezimpilo zethu.
Yonke imikhiqizo yethu iyatholakala emakhemese ahlukene, izitolo zemikhiqizo yezempilo kanye nezinye nje izitolo. Ukuze uthole olunye ulwazi shayela ucingo ku-(012) 653 8143.
Ukuba buthaka kakhulu kwempilo
Izinto ezichazwe ngenhla ziholela ekubeni buthaka kwempilo yethu ngoba sivumela izivikeli mzimba zethu ukuthi zikhathale bese zingasasebenzi ngempumelelo. Yingakho-ke sibekeka njalo engozini yokuphathwa yizinhlobo ezahlukene zezifo kanye nokufa. Uma silokhu singaphansi kwalezi zimo, izivikeli mzimba ziba sesimeni esibi kakhulu.
177 Koedoe Street, WIERDA PARK PO Box 50358, 0149 Imibuzo Ngemikhiqizo: 012 653 8143 Iselula: 0824968520 I-e-meyili: [email protected] www.aaacd4max.co.za
Sunnyprint Centurion (012) 664 0940
Ukwanela kwezivikeli mzimba
Ukwanela kwezivikeli mzimba kukalwa ngokwesayensi bese kubikwa njengokubalwa kweCD4. Ukubalwa kwe-CD4 okuphakathi kwama-200 ne-2000 zingayigcina impilo isesimeni esijwayelekile. Ngokwemvelo, lokhu kusho ukuthi uma ngabe ukubalwa kwe-CD4 kusondele kakhulu ema-200 izivikeli mzimba zakho azizusebenza ngempumelelo kahle. Lokhu kuba sema-200 noma ngaphansi kokubalwa kwe-CD4 kusho izinto ezinzima kumuntu one-HIV.